Andro maneran-tanin’ny fampiasana lava-piringa
« Manamboara toeram-pivoahana manerana ny fokontany ! »
19 novambra : Andro maneran-tanin’ny fampiasana lava-piringa ; Mbola vitsy ny tahan’ny olona mampiasa lava-piringa ary raha misy aza ny fampiasana izany dia tsizarizary ihany koa.
Maika ar ymiatra aman’aina ny fanamboarana izany toerana izany ho an’ny isan-tokantrano, isann-tanàna, isam-pokontany ary isaky ny kaominina.
Singanina manokana amin’ity taona 2014 ity ny zazavavy, ny tovovavy ary ny vehivavy izay mila mampiasa gabone isan’andro. Tsy vitan’ireo ny matifitra ambodihazo, mamely anaty tavoahangy. Injay rehefa ten aporitra, lasa mihataka tsy ho hitan’ny mason’ny mpandalo, manainga zipo na manaborotsaka paraloha menamenatra vao mandefa ny mavesatra.
“Ny fanamboarana gabone isam-pokontany izao no fanirianay. Misy fotoana ianao maika ka rehefa atoandro any vao mahatsiaro fivoahana kanefa tsy mahita lava-piringa azo antoka eny amin’ny fokontany alehanao. Sarotra be ihany koa ny hiditra an-tokontanin’olona ka hiangavy azy hindrana tranokely hanariana ny tsy zaka. Misy fokontany eto Antananarivo tsy ahitana ireny WC-douche ireny kanefa io toeran iray io no mila atao betsaka eto. Raha toa ka misy olona miteny hoe lafo ny mandoa Ar 50 na Ar 100 amin’ny fivoahana dia tsy vonon-kitandro fahadiovana izy izay”, hoy Haingotiana Razanamahery, mpivarotra manazava.
Fanajana ny zo mahaolona ny fampiasana ny gabone azo antoka ary fanoitra hiadiana amin’ny fangerena an-kalamanjana. Afaka misoroka ny aretina sy ny loto ary ny loza ateraky ny herisetra ny fivoahana amin’ny gabone madio sy azo antoka.
Atomboka isan-tokantrano izany ka trano fonenana iray gabone iray. Alavirina araka izany ilay foto-pisainana tia hahazo be ka manao tranobe iray ho an’ny mpanofa maromaro kanefa toeram-pivoahana iray no ampiasian’ny olona 20 mitoetra amin’ny rihana 5.